Mitsikera ny fanararaotana ara-pitsarana ataon’ny Huawei amin’ireo mpiasany teo aloha ny mpiserasera Shinoa · Global Voices teny Malagasy
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Italiano, русский, Español, English
Avy amin'ny sarin'i Marco Verch ny sary: fangon'ny Huawei eo ambany fitaratra manatsara endrika (CC: AT)
Heverina ho iray amin'ireo marika nasionaly mahomby indrindra izay nametraka ampihimamba eo amin'ny tsena anatiny nampiroboroboan'ny fividianana noho ny fitiavan-tanindrazana ny Huawei, ilay goavan'ny teknolojia malaza indrindra any Shina. Na izany aza, voatsikera noho ny fitoriana heloka bevava napetrany hanenjehana ny mpiasany teo aloha, Li Hongyuan, izay notanan'ny polisin'i Shenzhen nandritra ny 251 andro ny orinasa vao haingana, rehefa niampanga an'i Li ho naka vola tsy ara-dalàna tamin'ny orinasa, fiampangana izay naha-afaka madiodio an'i Li taty aoriana.
Satria nanohana an'i Li an-tserasera ny mpiserasera, dia nisy tranga hafa indray nipoitra fa nampijaly ny mpiasany teo aloha ny Huawei ary nanomboka nanakana ny adihevitra tao amin'ny media sosialy ny mpanivana habaka. Nampiasa andiana kaody avy eo ireo mpisera aterineto hanesoana ny fomba fanararaotan'ny Huawei:
Ny kaody Huawei izay malaza ankehitriny: 985, 996, 035, 251, 404.
Mitady olona avy amin'ny anjerimanontolo 985.
Ataovy miasa 996 izy ireo.
Roahy eo amin'ny faha-35 taona izy ireo.
Torio ny mpiasa teo aloha noho ny fahazoana onitra tokony omena azy ireo. Notanana nandritra ny 251 andro i Li Hongyuan.
Sivano ireo fifanakalozan-kevitra rehetra amin'ny media sosialy.
[Fanamarihan'ny tonian-dahatsoratra: ny 996 dia midika hoe miasa manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 9 hariva, miasa 6 andro isa-kerinandro]
Raharaha Li Hongyuan
Niharihary ny zava-nitranga taorian'ny fanapahan-kevitry ny fitsarana niparitaka tamin'ny aterineto tamin'ny 28 Novambra. Raha ny antontan-kevitra, dia nosamborin'ny polisin'i Shenzhen tamin'ny 16 desambra 2018 i Li Hongyuan, mpiasan'ny Huawei teo aloha noho ny fiampangan'ny Huawei azy ho naka vola tsy ara-dalàna. Notanana nandritra ny 251 andro izy noho izany.
Nolavin'ny fitsarana ny fiampangana noho ny “heloka bevava manjavozavo sy ny tsy fahampian'ny porofo”. Nifampiraharaha tamin'ny sekreteran'ny orinasa i Li mikasika ny fanonerana amin'ny famaranana asa izay eo amin'ny 300 000 yuan (42.430 dolara amerikana) eo ho eo ary noraketiny am-peo ny fifampiraharahany tamin'ilay sekreteran'ny orinasa. Satria afaka madiodio tamin'ny fiampangana izy, dia nahazo onitra 100.000 yuan (14.100 dolara amerikana) i Li noho ny fitazonana azy tsy ara-dalàna.
Nanambara tamin'ny fampahalalam-baovao teo an-toerana i Li taty aoriana fa efa nihaona tamin'ireo mpiasan'ny Huawei teo aloha tany amin'ny fonjan'i Shenzhen izay samy niatrika fiampangana mitovy avokoa. Tranga iray malaza amin'izany ny an'i Zheng Meng izay nosamborin'ny polisin'ny Shenzhen nandritra ny fizahan-tany nataony tany Thailandy tamin'ny 30 desambra 2018 ary notazonina tao Shenzhen nandritra ny 90 andro noho ny fakana vola tsy ara-dalàna. Tao anatin'ny fifampiraharahana tamin'ny orinasa izy mikasika ny fanonerana ny andro nialana tsy naloa vola.
Ankoatra ireo mpiasa, nosamborin'ny polisin'i Shenzhen noho ny fanaparitahana tsaho ireo mpiserasera marobe nitsikera ny vokatra Huawei. Ohatra, nosamborina tamin'ny fiandohan'ny volana novambra 2018 i Wang Hao, izay miasa amin'ny fampahalalam-baovao momba ny teknolojia ary notazonina nandritra ny 252 andro noho ny fanakianana ny Mate 20 findain'ny Huawei. Afaka madiodio izy taty aoriana saingy tsy nahazo onitra tamin'ny fanagadrana azy tsy ara-dalàna.
Satria nitohy ny tabataban'ny mpiserasera, dia niditra an-tsehatra ny mpanivana tranonkala mba hanakana ny fifanakalozan-kevitra amin'ireo sehatra media sosialy Shinoa. Voasakana tao amin'ny Weibo ny lahatsoratr'i William Long, bilaogera momba ny teknolojia malaza, tamin'ny 30 Novambra ary naneho ny fahasosorany tao amin'ny Twitter izy:
Voafafa tao amin'ny Weibo ilay lahatsoratra hoe “nogadraina nandritra ny 251 andro ilay mpiasan'ny Huawei teo aloha efa niasa 13 taona noho ny resaka fanonerana amin'ny famaranana asa.” Ambarako eto fa tsy hividy vokatra Huawei intsony aho manomboka izao. Maharikoriko tokoa io orinasa io.
Fantatra fa saro-tadiavina tao amin'ireo sehatra media sosialy Shinoa ny voambolana fototra Huawei sy Li Hongyuan:
Namafa votoaty maro dia maro mikasika ny tranga Huawei sy Li Hongyuan ny Weibo sy Wechat. Tsy fantatra raha avy any amin'ny departemantan'ny seraseram-bahoakan'ny Huawei ny sivana. Afaka manakana ny fiparitahan'ny vaovao ratsy ny manampahefanan'ny sivana. Tsy nahazo ny fanohanam-bahoaka ny Huawei hatramin'ny nisian'ny tranga Meng Wangzhou. Mahamenatra.
Propagandy very maina
Nifanojo tamin'ny fitsingerenan'ny fametrahana an-trano mitokana an'i Meng Wanzhou, Tale Mpanatanteraka sady Tale ara-bolan'ny Huawei ny 1 desambra. Any Kanada miandry ny fitsarana raharaham-pampodiana any Etazonia ity tale ity noho ny resaka hosoka tamin'ny banky ary efa nikarakara tati-baovao mitsikera ny raharaham-pitsarana ho “misy ambadika ara-politika” ny ao amin'ny fanaovana propagandy shinoa. Fa tamin'ity indray mitoraka ity, tsy nandinika ireo tatitra tamin'ny fihetseham-po feno fitiavan-tanindrazana ireo Shinoa mpiserasera. Nanararaotra indray ireo hamelezana ny Huawei. Nampiseho sarin'efijery ny sasantsasany tamin'ireo fanehoan-kevitra niavaka tao amin'ny randram-baovao Shinoa i @Tullymonster77:
Nanodina ny zava-drehetra ny tranga Huawei 251. Ny hisamborana an'i Meng Wanzhou ihany no lazain'ny ny vahoaka rehetra. Very maina propagandin'ny antokom-panjakana
Ity ambany ity ny sasany tamin'ireo fanehoan-kevitra nopihana an'efijery:
Tsy hisy olona hangoraka an'i Meng Wanzhou ankehitriny, na dia maty tany am-ponja aza izy.
Kanadiana i (Meng), tsy misy idirany amin'ny vahoaka Shinoa.
Tia namana loatra ny Kanadiana. Tokony nampidiriny am-ponja ny printsesy. Ankehitriny izy afaka mandehandeha [mirehareha]. Fandraisana mahafinaritra tokoa.
Vondron'orinasa mafia tahaka izany. Tsy anontaniana raha mila manao famotorana momba izany i Etazonia. Arovan'ny triady [sendikan-jiolahy] ao Shina io. Firy ireo olona novolavolain'izy ireo ? Manantena hahita azy ho bankirompitra atsy ho atsy.
Tamin'ny 2 Desambra, namaly ny raharaha tamin'ny fanambarana ny Huawei:
Manan-jo sy adidy hitatitra izay fitondran-tena tsy ara-dalàna any amin'ny mpitandro filaminana ny Huawei. Manaja ireo manampahefana misahana ny fampiharana ny lalàna izahay, anisan'izany ny fanapahan-kevitra noraisin'ny polisy misahana ny filaminam-bahoaka, ny mpampanoa lalàna sy ny tribonaly. Raha nihevitra i Li Hongyuan fa voahitsakitsaka ny zony, dia afaka mampiasa ny fitaovana ara-pitsarana mba hiaro ny zony izy ary mitory ny Huawei. Hampiseho ny fotokevitry ny fitovian-jo eo anatrehan'ny lalàna izany.
Miharihary fa tsy miala tsiny momba ny fanagadrana an'i Li nandritra ny 251 andro ny Huawei. Ary manohy mamelaka ny Huawei amin'ny fanelezana ny kaody: 985, 996, 035, 251, 404 ny mpiserasera.